म्यादी प्रहरी : ५५ दिनको कमाईबाट ‘ऋण-फि’ सम्म ! - Naya Patrika
म्यादी प्रहरी : ५५ दिनको कमाईबाट ‘ऋण-फि’ सम्म !
टोपलाल अर्याल गुल्मी, १२ पुस | पुष १२, २०७४
गुल्मीमा ५५ दिनको तलब बुझेर म्यादी प्रहरी बिदा भएका छन् । निर्वाचनभरी आफ्नो ड्युटि निर्वाह गरेका म्यादी प्रहरी तलब बुझ्दा निकै खुशी भए । प्रत्येक म्यादी प्रहरीले एकजना प्रहरी जवानले पाउने तलब सरहको रकम बुझेका छन् ।
सिमित मात्रामा रहरले म्यादी प्रहरी भएपनि अधिकाशंको पीडाले गरिबी र बेरोजगारी नै थियो । झण्डै दुई महिनाको तलव बुझेका उनीहरुको घरको ऋण तिर्ने, पढाई खर्चदेखि सिपमुलक तालिम सम्मका उदेश्य छन् ।
म्यादी प्रहरीको चिन्ता : तलव ऋण तिर्दै सकिन्छ
मालिका गाउँपालिका ५ छापहिलेका बिमल गिरी २३ वर्षका भए । घरमा चरम गरिबीको कारणले म्यादीमा भर्ना भएका गिरीले अहिले बुझेको रकमले घरकै ऋण तिर्ने सोच बनाएका छन् । उनले भने, ‘यो रकमले घरको ऋण तिर्न र सामान्य घरखर्च चलाउन पनि मुस्किल पर्छ, । घरमा पहिलेदेखिकै ऋण छ ।’
मालिका गाउँपालिका ७ घमिरका दुर्गेश थापाले पनि म्यादी प्रहरीको रकम घरपरिवारकै काममा खर्चिने बताए । घरमा भएको केही ऋण तिर्ने, घरमा चाहिने चामल र लत्ताकपडा आदि किन्ने उनको सोच छ । ‘घरमा भएको ऋण तिर्ने र आन्नपानी किन्दैमा यो रकम सकिन्छ’ उनले भने ।
धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसिथोकका रमेश पोखरेलले पनि म्यादी प्रहरीको रकम घरखर्चमै खर्चिने बताए । केही महिनाअघि विदेशबाट आएका पोखरेल फुर्सदको समयमा म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएका हुन् । २५ वर्षीय पोखरेलले निर्वाचन अवधिभर निकै कष्ट भएपनि दुखको फल पाउदाँ निकै हर्षित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
तीन महिनाको तलव एक वर्षको पढाई खर्च
मुसिकोट नगरपालिका ३ की गीता भण्डारी रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा बि.एड. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत् छिन् । पढ्दा पढ्दै म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएकी उनले म्यादी प्रहरीको तलव पढाइमै खर्च गर्ने बताइन् । क्याम्पसको चर्को मासिक शुल्क, कोठा भाडा, कापी, कलम आदिमै रकम खर्चने उनको सोच छ । ‘विद्यार्थी जीवन हो, कापी कलम र फिसमै खर्च धेरै आउँछ,‘उनले भनिन्, ‘पढाइ खर्चकै लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएकी हुँ ।’
धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसिथोकका डिल बहादुर घर्तिमगर पनि पाञ्चायन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा पढ्छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि भर्ती भएका उनीले म्यादीको रकम पढाइमै खर्चने बताए । ‘स्कूलमा कापि–किताब किन्न, ड्रेस लगायतका क्षेत्रमा रकम खर्च हुन्छ,’उनले भने, ‘बुझेको रकमले अबको १ बर्ष पढाई खर्च पुग्छ ।’ त्यसका साथै केही रकम घरखर्चमा खर्चिने पनि उनले बताए ।
इस्मा गाउँपालिका १ हस्तिचौरका लक्ष्मी विकले पनि म्यादी प्रहरीको रकम पढाइमा खर्च गर्ने बताइन् । तम्घासमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी विकले पढाई खर्च जुटाउनकै लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएको बताइन् । विक रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत् छन् ।
म्यादी प्रहरीको अबको पाँच वर्ष : नगर प्रहरीदेखि परदेशसम्म
अब चाहेर पनि पाचँ बर्षसम्म म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुने अवसर छैन् । बेरोजगार युवाहरुका लागि स्थानिय निकायको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आम्दानीको स्रोत नै बन्योे ।
हरेक म्यादी प्रहरीलाई आधारभुत सैन्य तालिम समेत दिइएको छ । हातमा प्रमाणपत्र बोकेका म्यादी प्रहरीको अबको बाटो निश्चत छैन् । अब खाली बस्ने उनीहरुलाई रोजगार दिने राज्यसँग कुनै ठोस योजना छैन् । तर, अधिकाशं म्यादी प्रहरीहरुको नगर प्रहरीमा भर्ती हुने, विभिन्न सिपमुलक तालिमहरु लिने र व्यवसाय गर्ने जस्ता लक्ष्य राखेका छन् ।
‘सिलाई कटाई र पार्लर जस्ता सिपमुलक क्षेत्रमा म्यादीको रकम खर्च गर्छु र पछि व्यवसाय गर्छु,‘मालिका गाउँपालिका १ नेटाकी सृजना विकले भनिन्, ‘आजसम्म लगानी गर्ने रकमको अभावमा खाली बसेकी थिएँ ।’ त्यसका साथै उनले पछि अन्य रोजगारका अवसरहरु पनि खोज्ने बताइन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका ४ का मेघ बहादुर मुखियाको भने भोली नगर प्रहरी हुने मनसाय छ । सोहि ठाउँकै ठाकुर बस्नेतले भने म्यादी प्रहरीमा काम गरेको रकम वैदेशिक रोजगारीका लागि लगानी गर्ने बताए । अब नेपालमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएकोले वैदेशिक रोजगारीको बाटो तताउन लागेको उनको भनाई छ ।
राज्यले म्यादी प्रहरीलाई काम दिन कुनै विकल्प नदिए करोडौको लगानी क्षणिक मात्र बन्ने छ । बिकल्पहिन जनशक्ति म्यादी प्रहरीका प्रमाणपत्र बोकेर भौतारीनुकाे विकल्प छैन । त्यसैले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भई काम गरेका मुसिकोट नगरपालिका १ पौदी अमराई गुल्मीका हिमाल घर्ती मगरको भनाई छ । ‘हामीसँग काम गर्ने उर्जा बल्ल पलाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई नगरप्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
गुल्मीमा एक हजार ८४ जना म्यादी भर्ना भएका थिए । उनीहरुले जम्मा ५५ दिन काम गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक गंगा बहादुर थापाले बताए । एक जना म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको ४९ हजार आठ सय रुपैयाँ बुझेको थापाले बताए । उनले पनि राज्यले धेरै लगानी गरेर उत्पादन गरेको यो जनशक्तिलाई कही न कही व्यावस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।